Blog-Tipping: Blog Suuq-geynta Uk | Martech Zone
Blog-Tipping: Blog Suuq-geynta Uk
Talaado, July 17, 2007 Sabtida, Oktoobar 20, 2012 Douglas Karr
Ku xigta si aad u sameysid darsin darsiga ayaa ah, si macquul ah, Blog Suuq-geynta Ukunta!
Ku saabsan Ukunta Suuqgeynta: Susan Payton waa Maamulaha Iskaashiga Suuqgeynta Ukunta. Waxay haysataa MBA jaamacadda Central Arkansas, waxayna haysataa shahaadada BA oo Ingiriis iyo Faransiis ah. Susan waxay u shaqeysay sidii qoraa dhanka awooda hal abuurka mudo toban sano ah. Hadda waxay uga faa’iideyneysaa kartideeda hal-abuur aqoonteeda iyo khibradeeda suuqgeynta, dhaqaalaha iyo ganacsiga.
Waa kuwan Talooyinkaaga Blog:
Waan jeclahay dareenka 'joornaalka' nadiifka ah ee ku soo dhacaya boggaaga! Qaab dhismeedka ayaa si aad ah u nadiif ah oo qol leh - si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay! Waxaan u maleynayaa inay jirto fursad ku jirta bartaada naviga si aad ugu qorto Subscribe to RSS ama Email link. Waxaa laga yaabaa in bidix loo caddeeyo Gurigaaga iyo wixii ku saabsan xiriiriyeyaasha… ka dibna xaq loo caddeeyo foomka rukunka iyo sumadda RSS. Haddii aysan ku jirin baarka maraakiibta, ka hooseeya midigta dhinaca midigta.
Waxaan kugula talinayaa astaanta RSS
bogagga badankood waxay ku yaalliin dusha iyo dhinaca midig ee bogga 'kor ka laab laab'… taasi shuruud uma aha in la rogrogo. In kasta oo daalacashada badankood ay hadda si muuqata uga mid yihiin awooda RSS - sumadda RSS waa baaq qarsoodi ah oo loogu talagalay waxqabadka dadka inay iska diiwaangeliyaan!
Sans serif farta uma saaxiibtinimo sida noocyada serif ee akhriska - laakiin marar dhif ah ayaad u heleysaa xarfaha xarfaha si joogto ah loogu akhriyo maqaallada shabakadda. Ma hubo sababta laakiin anigu sidoo kale uma isticmaalo. Si aan u magdhabo, in kastoo, aan hubiyo in cabbirrada xarfaha aan akhriyi karo. In muddo ah, waxaan aragnay cabbirka xarfaha oo ku sii yaraanaya mareegaha maaddaama kormeerayaashu ay sii weynaanayaan.
Hadda kormeerayaashu waa kuwo aad u ballaaran oo leh go'aammo aad u sarreeya - oo ka dhigaya noocyada farta yar yar oo ay adag tahay in la akhriyo! Waxaan u nimid goobaabin buuxda. Waxaan kugula talin lahaa inaad kordhiso font-size-ka mawduucaaga oo ah laba tiro. Waxaad u sameyn kartaa kaliya qolkaaga muraayad adigoo ku daraya font-size: 13px #contentmiddle in your stylesheet.
Marka aan sameeyo tilmaamahan, marwalba waxaan arkaa aniga oo jebiya xeerarkayga! Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talin lahaa in aad loo isticmaalo cinwaanada (h2 iyo / ama h3) ee ku jira mawduucaaga iyo sidoo kale liisaska liistada leh. Si daacadnimo ah, dadku runtii 'ma akhriyaan' baloogyada iyo degellada intay iyagu iska xoqaanba. Waxay u baahan tahay innaga faqash waxyaabahayaga. Ka fikir baloog kasta sidii qalfoof. Ku dar cinwaan madaxa, jirka, lugaha iyo cagaha. Ka dib ku dar xoogaa dhibco xabadka feerahaaga. Markaad dib u eegis ku sameyso shaqadaada, hubi markaad xoqdo maqaalka, waad fahmi kartaa waxa guud ahaan boostadu isku dayeyso inay dhahdo iyadoo aan si dhab ah loo akhrin erey kasta.
Iyada oo ay weheliyaan cinwaannada iyo rasaasta - hubi inaad isticmaasho sawirro si aad u kala soocdo qoraaladaada. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay marka akhristayaashaada ay ka akhrinayaan qoraaladaada aqristaha quudinta halkaasoo ay ku yaalliin dhammaan astaamaha bartaada
la sifeeyey. Sawirku wuxuu u qalmaa kun akhristayaal! Waan ballan qaaday. Waxaad ka heli doontaa wax yar oo ka mid ah qoraalladayda iyada oo aan sawir lahayn waxaanan dareemay kor u kac degdeg ah oo isdaba-joog ah oo ku saabsan riix-ku-dirista qoraalladayda.
Miyaad ka fikirtay ku calaamadeynta bartaada bartaada internetka ama dhinaca kale? Uma maleynayo inay wax badan qaadaneyso u guuritaanka astaantaada boggaaga ama xitaa inaad u adeegsato balooggaaga inuu yahay barta dhexe ee boggaaga. Isbeddellada maalmahan ayaa isku milmaya labada… baloogyada ayaa aad ugu eg bogagga in badanna bogagga ayaa adeegsanaya farsamooyinka wax lagu qoro. Waxaan haystay degel degel ah in muddo ah, oo la I wacay Coders4Hire. Waxaan helay kadib markii waxoogaa yar oo qoraal ah inaan ganacsigeyga si xawli ah ugu kobcayo barteyda marka loo fiiriyo boggeyga! Waxaa laga yaabaa inaad isla hesho.
Uguyaraan, hubi inaad kudirto xiriiriye buuggaaga dhinaceeda dhinaceeda ah! Buuggaaga, 101 Talooyin Ganacsi, ayaa kalsooni badan u keeni doonta codkaaga baloogga markaad sii wado dhismaha maamulka! Sidoo kale, waxay kor u qaadi doontaa iibkaaga maaddaama bartaada internetka ay ku korayso kalsooni.
Waxay sidoo kale qaadan doontaa qaar ka mid ah booska cad ee khaanaddaas. Kuguma dhegi doono - Waxaan u maleynayaa inaad weli u shaqeyneyso mawduuca!
Waxaan ku arkay calaamado meta nooc ah oo ku jira madaxyadaada - laakiin ereyada muhiimka ahi waa madhan yihiin. Waxaan kugula talin doonaa labo ka mid ah plug tag tag in aan ku qoray qoraal hore.
Taasi waa inay kugu mashquulisaa xoogaa! La socodsii sida bartaadu u socoto ka dib markii la hirgeliyo qaar ka mid ah isbeddeladan. Dulqaad yeelo! Ku guuleysiga balooggu wuxuu ku saabsan yahay Mawduuc, Xamaasad iyo Hawlgal!. Fadlan sidoo kale ha noqon shisheeye - waxaan jeclaan lahayn inaan dib u maqalno sida ay wax u socdaan!
Sida loo helo Taabashadaada Blog
Hadaad jeceshahay Bloggaaga Tilmaaman, si fudud u raac tilmaamaha aniga ku yaal Boostada Tipping Blog.
Tags: talooyinka blogblog suuq geynta ukunta
Ka Shaqeynta Saacado Badan Guriga? Hab fudud oo loo Joojiyo…
Blogging Corporate: Tobanka su'aalood ee ugu sareeya shirkadaha